ကိုယ်ရေးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်း/written about me by me | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
Homeကိုယ်ရေးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်း/written about me by meစဉ်းတီတုံး သုံးတဲ့အခါ အရောင် ခွဲခြားမှု( how to use chopping boards)ပဲအမည်များ (Peas,Beans,lentils)အဆင်ပြေဖွယ် ဟင်းချက်အချိန်အတွယ်ရေသတ္တဝါများ (Seafood and fresh water fishes)
Share this:EmailLike this:Like Loading...	110 comments on “ကိုယ်ရေးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်း/written about me by me”	saw myat hsu
20/02/2012 @ 9:05 pm	အိသက်ရေ…
20/02/2012 @ 11:40 pm	မ အရမ်းကျေးဇူးနော် ။ စမ်းချက်စရာမလိုအောင်တော်ပြီသား မဆုက.
Reply	saw myat hsu
21/02/2012 @ 12:26 am	မဆုလက်ရာတွေကျကုန်ပြီ… ဖြစ်သလိုချက်နေရတာ အတော်ကြာနေပြီ…:(
21/02/2012 @ 12:47 am	ကလေး လေးငယ်သေးလို့ပါ ၊ မဆုကတော်ပြီးသား ပြန်ချက်ရင် ပြန်ကောင်းမှာသေချာတယ်၊ သမီး ကလဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ မဆုရယ် :)
21/02/2012 @ 12:51 am	ei thet yay.., i hope so…:) thanksalot…
21/02/2012 @ 1:21 am	:)
Reply	Kay Khine Win
21/02/2012 @ 5:17 am	မ..အရမ်းတော်တာဘဲ..ဟင်းတွေအားလုံးကြိုက်တယ်..လိုက်ချက်ကြည့်မယ်နော်.. :)
21/02/2012 @ 3:27 pm	ကောင်းတာပေါ့ ညီမလေးရယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။ :)
Reply	ma mie ( myint myint thein )
24/02/2012 @ 5:00 am	အခုတော့ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့မြေးလေးပေါ့…အိသက်ချက်တဲ့ဟင်းတွေအားလုံးကြိုက်တယ်…အမြဲအားပေးနေတယ်နော်…….
24/02/2012 @ 10:54 am	ကြိုးစားနေဆဲပါ မမီးရယ်..
25/02/2012 @ 6:09 pm	မအိသက် ဟင်းချက်ဝက်ဆိုက်လေးကို အတွက် အထူးကျေးဇူးပါ… အိမ်မှာ ကြေးအိုးလုပ်စားချင်နေတာကြာပြီ၊ ခုမှ မအိသက်ဆီက နည်းရတော့တယ်.. အထူးရှဲရှဲ
25/02/2012 @ 7:06 pm	မကလဲ ကျေးဇူး ပါပဲနော်။ website လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ။
Reply	kyaw oo
26/02/2012 @ 5:52 am	five spice powder ဆိုတာ ဘာလဲ
10/03/2012 @ 1:37 pm	It’saChinese Marsala par.
Reply	SanSan Tin
26/02/2012 @ 3:21 pm	Thanks for sharing.
26/02/2012 @ 7:30 pm	thank u for watching naw. Ma San San
26/02/2012 @ 9:33 pm	thank u .
Reply	lynn ei
27/02/2012 @ 3:40 am	oh my dear . now only I know that you are grand daughter of Danuphyu Daw Saw Yee . I like your link and you are very capable woman indeed :) thanks for your sharing sis . It is very helpful . Let me share on my FB wall
28/02/2012 @ 9:21 pm	အိသက်ရေ…
28/02/2012 @ 11:03 pm	မဆုရေ နီးနီးလေးဆိုရင်တကယ်ကျွေးချင်ပါတယ် :)
29/02/2012 @ 2:01 am	thanks ei thet yay.., will eat when we visit to London…:)
29/02/2012 @ 2:22 pm	of course, ma hsu. cant wait to meet ur little angel.
Reply	Zin Wint Maw
04/03/2012 @ 10:22 am	Hi Ma Ei,
04/03/2012 @ 10:55 am	Oh! Thanksalot for watching my website and glad u like that. Thanks for being our fan. Zin yay. Come visit to my Website whenever u r free.
06/03/2012 @ 5:05 am	ညီမရေ..၀င်ကြည့်သွားတယ်….ချက်စားစရာတွေအများကြီးရသွားလို့
06/03/2012 @ 9:45 am	ရပါတယ် မ :)
Reply	U Aung Myin Oo
06/03/2012 @ 8:45 am	Tameelay,
06/03/2012 @ 10:32 pm	Dear Mum and Dad,
11/03/2012 @ 7:29 pm	အိသက်ရေ ..
11/03/2012 @ 7:45 pm	မမို ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့အရမ်းပျော်တာပဲ။ ကျေးဇူးပါမရယ်။ အိသက် က Burglish ကနေရေးရတာ။ လက်ကွက်နဲ့မ နှိပ်တတ်လို့ ၊ Post တခါတခါတင်ရင်အရမ်းကြာတာ။ :)
11/03/2012 @ 7:43 pm	Ma Ei Thet,
Thank you so much for this site. I am so proud of you. It’s amazing that you could find time to write, cook, work and so on. Suchatalented young lady. Keep posting :)
11/03/2012 @ 7:48 pm	I did full time before but I just reduced my hours to stay at home with kids and cooking. That is why I hv time. thanks for ur sweet comment.
Reply	Hnin Haymar
11/03/2012 @ 10:35 pm	မမအိသက် ရဲ့ food blog လေးရော bio လေးရော.. အရမ်းကို ကြည့်လို့ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ အိမ်မှာချက်သမျှဟင်းတွေထဲမှာ အစ်မဆီက idea တွေ အများကြီးယူရပါတယ်။ ခုလို ဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့ ဇနီးကောင်း မိခင်ကောင်းရလို့ အစ်မမိသားစု သိပ်ကိုကံကောင်းပါတယ်။ :)
12/03/2012 @ 8:03 pm	ဟေမာလေး ရေ မမိသားစု ကလဲ ညီမလေးရဲ့Sweet comment လေးအတွက်ကျေးဇူးပါနော်။ ဟေမာ လေးဆီကသင်စရာလေးတွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်လဲ blog ကို လာလည်ပါညီမလေးရေ :)
Reply	koreyasu makoto
12/03/2012 @ 1:45 am	super like :)
12/03/2012 @ 7:56 pm	Thank you naw:)
Reply	Hnin Wut Yee
16/03/2012 @ 8:28 am	Ma Ma yae,
16/03/2012 @ 9:12 am	thank u for watching my website. if u like it pls pls share with ur friends naw. i already post မြေအိုးမြီးရှည် http://htetfamily.com/2012/02/07/မြေအိုးမြီးရှည် and will do toe hu nway on sunday for u. naw thanks.
Reply	ma toe
21/03/2012 @ 8:22 pm	ဟားဟားအိသက်ရေဒီဆိုဒ်ကိုဒီနေ့မှဖတ်ရတယ်သိလားဓနုဖြူဒေါ်စောရီမြေးမလေးဆိုတော့ဟိုက်အန်ကယ်ဦးလှအောင်နဲ့ဘာတော်ပါလမ့်ဆိုပြီးရှာတော့မှအန်ကယ်နဲ့အန်တီတို့ရဲ့သမီးအရင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုဟီးဟီးကမ်ဘာကြီးကကျဉ်းလိုက်တာနော်အိသက်နဲ့မတွေ့ဖူးပေမဲ့ဒို့နံမည်ကမတိုးပါအန်ကယ့်ကိုပြောပြလိုက်နော်ဦးသွင်လှသမီးအမေရိကားရောက်နေတဲ့တစ်ယောက်အိသက်ဘလော့ဖတ်ရလို့အရမ်းပျော်နေတယ်လို့မြန်မာအစာတွေငတ်နေတာကြာပြီကွယ်အိသက်ကိုကြေးဇူးတင်တယ်သိလားမုန့်လုပ်နည်းတွေအကုန်ပြောထားလို့လေအန်ကယ့်သမီးမို့တမင်ဝင်နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါနော်ပြီးတော့အန်တီတို့အန်ကယ်တို့လိုဘဲအိသက်ကခင်ဖို့ချစ်ဘို့ကောင်းတယ်နော်မတိုးလဲခလေး ၂ ယောက်နဲ့မီးဖိုချောင်ထဲရောင်လယ်လယ်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းနေရတဲ့အိမ်ရှင်မလေးပါဘဲကွယ်ချက်နည်းတွေလဲကော်ပီလုပ်သွားတယ်နော်ကျေးဇူးပါ
21/03/2012 @ 10:39 pm	ဟုတ်လားမရေ မနဲ့မသိပေမဲ့ အဲလိုမိဘတွေနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုလို့ ကိုယ့် ဆွေမျိုးတွေပြန်တွေ့ရသလိုအရမ်းပျော်တာပဲ ခဏခဏလာလည်ပါနော် blog ကို။ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကြော်ငြာပေးနော်။ ဖေကြီးနဲ့မနက်ဖြန် Vzo မှာတွေ့ရင်ပြောလိုက်မယ်နော် :)
22/03/2012 @ 2:29 am	Thank you so mcuh , Ma Ma Ei Thet.
22/03/2012 @ 8:30 pm	keep cooking Nyi ma lay. you will be super in cooking one day. :)
Reply	Kaung Myat Ohn Naing Aye Aye Maw(That's my new name......)
23/03/2012 @ 4:05 pm	That’s my sis…….yeah right….go go go go go…Aja Aja Fighting………..I’m so happy to seeablog within my family….as i haven’t seen any….cuz the connection and preventions here in myanmar sucks……Anyway,Sis U’re the best…..U did really pretty welll……………..
27/03/2012 @ 8:26 pm	အိသက်ရေ.. မဆုခုတလော အရမ်းအလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ခုမှပဲ အိသက်ရဲ့ blog ကိုပြန်လာလည်ဖြစ်တယ်……အားလုံးစားချင်တယ်…….အိမ်နီးရင် ကောင်းမှာပဲနော်……အိသက်ရေ မြန်မာပြည်က ရွှေခိုင် ရွှေလီ အကင်ဆိုင်တွေကလိုမျိုးအရသာရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟင်? ဒီက အကင်တွေကို ကြိုက်ဘူး..သိရင် ပြောပြပါအုန်း… ကျေးဇူးရှယ်…:)
28/03/2012 @ 12:34 am	i will do the bbq very soon Ma Hsu yay, naw . :)
28/03/2012 @ 12:54 pm	okie…thank you so much ei thet lay yay..:)
28/03/2012 @ 1:32 pm	Thanks for this blog Ei Thet. I just found out and love to try your recipe.
28/03/2012 @ 6:56 pm	Welcome Yawai. :)
04/04/2012 @ 8:42 am	Hi Nyi Ma lay
04/04/2012 @ 10:29 am	yes they r my family too. ma ma kalayar has married to my adopted bro.(my oldest aunty’s adopted son). he is real bro to us. she is now my cousin and also sis in law. anyway, nice to meet uama . :)
Reply	Aye Aye Paing
10/04/2012 @ 12:11 pm	မအိသက်ရဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေအားလုံးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်..အရမ်းလည်းချီးကျူးပါတယ်အစ်မရေ.. ကျွန်မလည်း ဟင်းချက်ရတာကိုဝါသနာပါလို့ အစ်မ website ထဲကို အမြဲဝင်အားပေးဖြစ်ပါတယ်..ဟင်းလေးတွေလည်း လိုက်ချက်စားဖြစ်ပါတယ်.. ဟင်းအမယ်အားလုံး အတွက်ကျေးဇူးနော်တစ်မ..အစ်မနဲ့ လေ facebook မှာ friend ဖြစ်ချင်တာ အသိမိတ်ဆွေမရှိလို့add မရလို့ လေ funky food ကိုပဲ like လုပ်ထားရတယ်..အစ်မတို့ မိသားစုပုံလေးတွေကြည့်ပီး သဘောကျလို့ ပါ nice family…..အစ်မတို့ မိသားစု ခုလိုပဲ အမြဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ…
10/04/2012 @ 7:15 pm	funky food ကို like လုပ်ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။ အမလဲ ညီမ email address နဲ့ friend လုပ်မလို့ရှာတာမတွေ့ဘူး .ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေနော် :)
18/04/2012 @ 2:51 am	လာလည်သွားပါတယ် မအိသက်… ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ… နောက်လဲ ဝင်ဖြစ်နေဦးမယ့် website လေးပါ…
18/04/2012 @ 8:44 am	thank you par :)
23/04/2012 @ 7:33 am	အမရေ … အမရဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ အများကြီးကို ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ အရမ်းလည်း သဘောကြတယ် .. အမ နည်းလေးတွေကို Share ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …… ဟင်းတွေအားလုံးကို သဘောကြတယ် … အမက ဟင်းချက်တာေ၇ာ .. ဟင်းတွေကို စားချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်တာရောမှာ အရမ်းမိုက်တယ် …….. အမကို အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပေမယ့် အိမ်ရှင်မကောင်းတယောက် အဖြစ် လေးစားအားကျမိပါတယ် … နောက်လည်း အမ Website ထဲကို ၀င်ဝင်လည်အုံးမယ်
23/04/2012 @ 11:02 pm	ကျေးဇူးပါညီမလေးရေ :)
25/04/2012 @ 4:48 am	အမရေ အမဘလော့ ပေါ်ကဟင်းချက်နည်းလေးတွေရလို့အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ပုဇွန်ငါးဆုပ်လုံး ဟင်းပါ။
25/04/2012 @ 4:50 am	Burglish ကနေမြန်မာစာရိုက်ရတာ။ :)
25/04/2012 @ 2:36 pm	စိတ်ဝင်စားတာကျေးဇူးပါညီမလေးရေ :)
29/04/2012 @ 11:55 am	Thank you very very much for sharing your beautiful recepies with us… it is so lovely.. especially the တိုဟူးနွေး
29/04/2012 @ 3:58 pm	yesterday , i made them for my best friends family . i will post it tonight naw
Reply	ma nwe
02/05/2012 @ 1:15 pm	ွှွှအိသက်ရေ အရမ်းတော်တာဘဲ..အားကျလိုက်တာ…ဒီ site လေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်..အားပေးနေမယ်နော်..ရန်ကုန်က အိသက်တို့ ဆိုင်က အမ တို့ ဆိုင်က ငရုပ်သီးမုန့် တွေအရင်တုန်းက ယူတယ်..အခုတော့ မသိဘူး အိသက်ရေ..အမ လည်း london မှာပါဘဲ..အိသက်ဆီက recepies လေးတွေရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ညီမ ရေ..
02/05/2012 @ 5:58 pm	what is ur brand or shop or parents name ma yay . then i will ask my mum. we can see each other if u r in london . here is my no 07515405576 :)
04/05/2012 @ 11:42 am	အမတို့ brand name က ဒေါ်ထွေး ငရုပ်သီးမှုန့် ပါ ..shop က သိမ်ကြီးဈေး မှာပါ ..အိသက်တို့ လို ဘဲ အမ တို့ အဖွားလက်ထက်ထဲ လုပ်ခဲ့ တဲ့ မိသားစု လုပ်ငန်းလေးပါ..အိသက် နဲ့ လည်းခင်ချင်ပါတယ်..အမ ဖုန်းက 07803147176 ပါ..
06/05/2012 @ 6:03 pm	မအိသက်ရေ
06/05/2012 @ 10:31 pm	Thanksalot for interesting :)
Reply	Aye Chan
19/05/2012 @ 5:46 am	ရန်ကုန်မှာ နေတုန်းက ဓနုဖြူဒေါ်စောရီမှာ အားပေးနေကြပါ။ :)
19/05/2012 @ 3:30 pm	thank you naw :)
Reply	cho cho chit
29/05/2012 @ 2:35 am	မ ရေ .. တင်ထားတဲ့ side ကို အထူးအဆန်းလေးတွေ ဝင်ကြည့် အတုခိုးရတယ်..တော်လိုက်တဲ့ မမ ရဝ်… ချို တို့အထုယူရလောက်တဲ့ အချက်အပြုပ်တော်တဲ့ မမ တစ်ယောက်ပါဘဲ…
29/05/2012 @ 4:40 pm	ချိုရေ နံမည်နဲ့လိုက်အောင်စကားပြောလဲချိုပါပေတယ် :)
02/06/2012 @ 1:49 pm	ညီမလေးရေ..
03/06/2012 @ 10:25 am	အားပေးတာကိုလဲအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လာလည်တာကိုလဲအရမ်းပျော်တယ်နော် ကျေးဇူးမရေ :)
Reply	Cho Cho Thein
09/06/2012 @ 10:47 am	အမ ရေ အရမ်း ကျေးဇူးတင် ပါတယ် …ချို က ဟင်း ကိုကောင်းကောင်း မချက်ဖြစ်တာလေ …ခု အမ
10/06/2012 @ 6:41 pm	cho yay , i did not know how to cook before too nyi ma lay. :)
Reply	Wut Yee Lwin
27/06/2012 @ 9:33 am	အိသက် ငါအရမ်းဗိုက်ဆာသွားပီ။ စိတ်ဆိုးသွားပီ :P။ ငါကတော့ ဟင်းမပြောနဲ့ မီးဖိုနားထောင်မကပ်မိတော့တာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ နင့်ပုံတွေမြင်မှ ဟင်းပြန်ချက်ချင်သွားပြီ။ အရမ်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းလေးကို အံသြသင့် တာ ပြောမကုန်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ လသာ၂တုန်းက အိမ်သက်နဲ့များ အံ့ရောအံ့ရောပဲ။ ဟီးဟီး နင်စာရေးတိုင်း ၂၉လမ်းနဲ့ ပန်းဘဲတန်းပါတော့ ငါတောင်အိမ်ကိုလွမ်းသွားပြီ။ နင်နဲ့အပြိုင်ဝေမာလည်း ဟင်းချက်တာကျွမ်းပါ့ :P. subscription ပါယူထားလိုက်တယ်။ :P
27/06/2012 @ 1:56 pm	အေးဟယ် ယောက်ျားကိုချစ်တော့လဲချက်ရတာပဲပေါ့၊နင်အပျင်းထူတာတွေ ကြွားမနေပါနဲ့ဟာ :P
12/08/2012 @ 10:03 am	Hi,Sis,
15/08/2012 @ 1:04 am	welcome naw :)
03/09/2012 @ 11:47 pm	hi,i worked together with ur uncle ko tin tun in japan long2 ago.how about ur uncle?no see longtime,sometimes remember him and his nephew kyaw swar my friend i regular customer in ur grandma,S RESTAURANT.thanks alot all posts.
04/09/2012 @ 12:23 am	U Tin Tun is like my own daddy.He is in good health in Yangon. Ko Kyi Kyaw Zwer passed away long time ago. Thanksalot and nice to meet you. :)
04/09/2012 @ 10:33 pm	Thanks for ur reply,so sorry about ko kyaw swar.ur uncle,friends ko nyunt aung,ko kyaw moe,ko myint swe all good health in japan many friends went back myanmar some moved to America.see u bye2.
05/09/2012 @ 12:55 pm	i will let him know :)
13/09/2012 @ 11:44 am	Nice to read your blogs, which I can read in Burmese (with zawgyi font ),but can’t write
13/09/2012 @ 3:44 pm	use that one http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm
Reply	Joe Myint
14/09/2012 @ 8:00 am	Hi Ei,
14/09/2012 @ 6:54 pm	http://facebook.com/ethet1 is my facebook :) my no is 07515405576
Reply	May Oo
15/09/2012 @ 12:54 pm	မြန်မာပြည်ကထွက်လာတုန်းကအမေ့ဆီကဘာမှမသင်ခဲ့တာ ခုမှပဲ မအိသက်ရဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေကိုသင်ယူနေရတယ်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ အစ်မတို့မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
16/09/2012 @ 11:29 am	အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ :)
15/09/2012 @ 5:19 pm	Thanks Ei
Reply	Aaron Yan
27/10/2012 @ 4:03 am	ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုတစ်ခုအကြောင်းဖတ်ရလို့ အားလဲကျ ၀မ်းလဲသာမိပါတယ်ဗျာ။ (ဒီတစ်ခါတော့ ဗျာဆိုတာလေးထည့်ရေးမှာ….မဟုတ်ရင် ပြားမှားစိုးလို့ :P )။ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
27/10/2012 @ 1:15 pm	a hae , sorry par hae . kyayy zuu par mg layy yae :)
13/11/2012 @ 7:22 am	မအိသက်ရေ အကိုတစ်နေ့ ကဆိုဒ်တစ်ခုမှာတွေ့ လို့ညီမရဲ့ ဆိုဒ်ကလေးကို အကိုတို့ သတင်းစာဝေမျှတဲ့ ဘလောက်လေးမှာ ဆင့် ပွားထားပါတယ်…ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ ထ္မင်းဆိုင်ကို အကိုတို့ လွန်ခဲ့သော အနှစ်၃၀လောက်တည်းက ရန်ကုန်မဂိုလမ်းအထက်ဆိုင် ရွှေထူးမိုးပျံခေါက်ဆွဲ ညီမတို့ သိမှာပါ ဘဲသားပေါင်းနဲ့ ထ္မင်းစားယင် ၆ကျပ်ခေတ်တည်းက အားပေးခဲ့ တာပါ အခုလည်း မလေးရှားရောက်နေပေမဲ့မြန်မာပြည်ကို ခနခနပြန်တိုင်း ၊ဝင်စားနေကြပါ၊လမ်းမတော်ညောင်ပင်လေးဈေးကြီး ဦးသန့်မသေခင်တည်းက၊ဦးစံထ္မင်းဆိုင်လည်း ကြက်အသဲမြစ်နဲ့စားမှ၂ကျပ်ခွဲခေတ်တည်းကပေါ့ ပြောယင်အစုံပါပဲ။လက်ယာတူတယ်၊မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာ့ထ္မင်းဟင်းလက်ယာနံပါတ်၁ဟုရာသက်ပန် သမိုင်းဝင် ထ္မင်းဆိုင်လို့ အားယင်လည်း စာပေရသလေးတစ်ခုဖြစ်ရေးသားပါအုန်းမယ် အကိုရဲ့ သေးငယ်လှသောဖရီးဘလောက်စပေါ့ လင့် ခ်နာမည်လေးမှာ http://mixgawli.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ် ဘလောက်မှာ ညီမငယ်တို့ လင့် ခ်ချိတ်ထားပါတယ်၊ထပ်ဆင် ပြီး ဒီကွန့် မက်ကိုဖတ်မိသူတိုင်း မသိသူကျော်သွား သိသူလုပ်စားလို့ ရပါတယ်-ဒီနည်းပညာနဲ့ မိမိတစ်နိုင်တစ်ပိုင် မိသားစုဝမ်းရေး စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်စားနိုင်ကြောင်း ထပ်လောင်း၍မြန်မာပြည်မှ ပြည်သူများကျော်ငြာပေးပါတယ်၊မဝတ်ရည်ရဲ့ နည်းလည်း စီးပွားဖြစ်လုပ်စားလို့ ရပါတယ်၊သူ့ နည်းပညာနဲ့ မလေးရှားမှာ လုပ်စားနေတဲ့မြန်မာထ္မင်းဆိုင်တွေလည်းတွေ့ရှိထားကြောင်း ဝမ်းသာစကားတစ်ခါတည်းမှာလိုက်ပါတယ်…ကိုဂေါ်လီအွန်လိုင်းမှ ကွန်ပျုတာနည်းပညာနှင့် သတင်းစာဝေမျှခြင်း
13/11/2012 @ 8:56 pm	kyayy zuu tin par taeako yay :)
18/11/2012 @ 2:28 pm	ရတနာ ဟင်းချက်ရတာ ဝါသနာမပါဘူး။ ဒါမယ့် မ site ထဲဝင်လာပြီးတော့မှ ချက်ချင်သွားတာ…. အမက စိတ်ရှည်တယ်နော်။ အားလုံးစမ်းချက်ကြည့်ချင်တယ်။ share ပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
ဒီထက် ပို၍ တိုးလို့ ဆပွား အောင်မြင်ပါစေနော်။ ခဏခဏ လာလည်မယ် :)
18/11/2012 @ 10:47 pm	ညီမလေးရေ မကြောင့်ဟင်းချက်ချင်သွားတယ်ဆိုလိုဝမ်းသာပါတယ် လသာ ၂ကတော့တော်တော်စည်းလုံးတယ်နော် တကျောင်းတည်းမှန်းသိရင် ပိုချစ်သွားရော:)
19/11/2012 @ 3:05 pm	ဟုတ်၏ :)
27/06/2013 @ 11:15 am	Thanks for this website :)
26/08/2013 @ 6:23 am	ိwebsite ထဲဝင်ကြည့်ပြီး မုန့်တွေ စမ်းလုပ်ကြည့်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပီစာလုပ်နည်းလဲ တင်ပေးပါအုံး
20/09/2013 @ 2:58 pm	မင်္ဂလာပါ မမ..
21/09/2013 @ 10:08 am	thank you for your website
03/12/2013 @ 4:02 am	hello! can you tell me what is the name of the Burmese roadside snack shown at the top of your blog ? It is the one on the black plate made of coconut and beans. Thanks!
04/12/2013 @ 1:28 am	Hi Joze
Reply	Cook Cook
28/12/2013 @ 1:39 pm	အမ rasa ထမင်းကြော် နှင့် nasi ထမင်းကြော် ကွာခြားမှုလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဗျ…….. ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။
08/02/2014 @ 4:27 am	ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..ကိုယ်စားချင်တာလေးကို လာလာကြည့်ပြီး လုပ်လုပ်စားနေလို့ မအိ က ကျမ ရဲ့ သင်ဆရာ တယောက်ပါ..။
09/02/2014 @ 10:35 pm	လာလာ ကြည့်တယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးပါနော် :)
Reply	Sandar Moe Tun
15/03/2014 @ 4:04 am	အမကတော့အိသက်ရဲ့ဖာလူဒါ ကူဖီလ်းကိုလုပ် စားကြည့်တယ်။ကလေးတွေအရမ်းကြိုက်လို့အိသက် ကိုကျေးဇူးတင်တယ်
23/03/2014 @ 10:13 pm	thanks for let me know nawama :) <3
Reply	Zin Kyi Win
21/03/2014 @ 6:45 pm	စာအုပ်ထုတ်ပါညိမရေ … အားပေးဖို့စောင့်နေမယ်
23/03/2014 @ 10:12 pm	စာအုပ်ကို အယ်ဒီတာက ထွက်ခိုင်းနေတာ ၁နှစ်နီးပါးရှိပြီ မအားတာနဲ့ မလုပ်နိုင်တာ အခု ထွက်ခါနီးပါပြီ thanksama :)
12/04/2014 @ 5:05 pm	မ..အရမ်းတော်တာဘဲ..ဟင်းတွေအားလုံးကြိုက်တယ်..လိုက်ချက်ကြည့်မယ်နော်..websitelay ko အထူးကျေးဇူးပါ
find the recipes	Search
My birthday and our 8th AnniversaryThe Big DayApril 4th, 2014The big day is here. It's my birthday as well as our wonderful anniversary. It was clear right from the start that me and him would never apart. Top Ratedfunky food	Blog Stats	993,251 hits